Jordan Henderson Oo Qarka U Saaran Inuu Sii Joogo Liverpool
HomeWararka CiyaarahaJordan Henderson oo qarka u saaran inuu sii joogo Liverpool
July 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Kabtanka Liverpool Jordan Henderson ayaa lagu soo waramayaa inuu haatan qarka u saaran yahay inuu kooxda sii joogo xilli ciyaareedka 2021-22.
Reds ayaa loo maleynayaa inay wadahadalo la furtay ciyaaryahanka khadka dhexe si heshiis cusub loogu saxiixo Anfield. laakiin Henderson ayaa lala xiriiriyay bixitaan maadaama wadahadalada ay ku guuldareysteen inay horumar gaaraan.
Henderson ayaa weli heysta labo sano oo kale oo uu ku sii joogayo qandaraaskiisa haatan, inkastoo, taasoo la micno ah in Liverpool aysan cadaadis weyn saareynin inay iska iibiso xagaagan haddii aan heshiis cusub la isku raacin.
Si kastaba ha noqotee, saxafiga Dean Jones ayaa qashinka ku daray wararka xanta ah ee lala xiriirinayo Henderson inuu baxayo, isagoo u sheegay Eurosport : “Marka laga hadlayo Henderson, ma tagayo xagaagan.
Arsenal , Paris Saint-Germain iyo Juventus dhamaantood waxaa lagu xamanayay inay il gaar ah ku hayaan horumarada ku hareeraysan mustaqbalka Henderson, kaasoo ku faano 30 gool 51 kalena caawiye ka ahaa 392 kulan oo uu ciyaaray Liverpool.